Tribal Paradise Tour of Arunachal | Dana + 91-993.702.7574 Kutarisa
Tribal Paradhiso yeArunachal
Tinotsvaka runyararo mukati meguta rakasununguka asi tichikanganwa kutora nguva isu pachedu. Kune vanhu vanotsvaka paradhiso pasi pano, Tribal Paradise Tour yeArunachal ichava kamwechete mukana wehupenyu hwose. Arunachal Pradesh, akakomborerwa nemasikirwo emadzimai, kupukunyuka kusvibiswa, magetsi emigwagwa, uye mhirizhonga yakawanda inoratidzika sepasi peparadhiso. Vanhu vehurumende vanozviita zvakanyanya. Upenyu hwemarudzi evanhu kumadokero kumadokero enyika hunoita nyika idzi dzakasiyana uye dzinomira kubva kune dzimwe nyika. Iwe hauzombodi kudzoka kubva kuTrabal Paradise Tour yeArunachal. Arunachal Pradesh ndechechokwadi chimiro chekumatenga nemarudzi makuru e26 kusanganisira madzinza madzinza. Rudzi rumwe norumwe rune mararamiro avo ega ega netsika. Mamwe madzinza makuru eArunachal ndeAdhi, Galo, Aka, Apatani, Nyishi, Tagins, Bori, uye Bokar. Mamwe madzinza ari nhoroondo dzenyika dzinoratidzira nyika kuti haisi iyo nyaya asi tsika inokosha kupfuura zvose. Aya madzinza ane ruzivo rwakakosha mumhizha. Vanogadzira zvishongo zvavo pachavo nemifananidzo yakaiswa pavari. Mamwe madzinza eWencho anozivikanwa nokuda kwekutema mifananidzo, iyo madzinza aNocte ekutengesa mazai ebheti, Mishomis mavereji akanaka uye varimi vanocherechedza nezvimwewo zvakadaro. Dzoka Paradhiso Paradhiso yeArunachal ichakutungamira munzvimbo dzakanakisisa dzehurumende, nokudaro kuyanana nevanogara. Zvinoshamisa, mune imwe nyika sediki seArunachal Pradesh, nezvemitauro yakasiyana ye90 inotaurwa. Vanhu vemarudzi pano vanozvirumbidza netsika dzavo netsika. Uya uzviise muArunachal Pradesh kuburikidza neTrabal Paradise Tour yeArunachal.
11 Nights Programme | Mutambo Wokushanyira: 132
ZUVA 01: FLY TO GAUHATI. KUTAVA KUNYANYA KUITA DIRANG
Dirang inenge iri pakati peTearpur naTawang. Mhedziso yemupata inofungidzira pachayo. Kune bhiriji pamusoro pemvura Kameng uye kune rumwe rutivi unogona kuona mahara akanaka paddy. Iyo Dirang misika inogonawo kuva nzvimbo yakaisvonaka inopedza manheru kutenga zvigadzirwa zvekumba. Dirang Dzong iri pedyo neBhutan uye hutungamiri hweBhutan hunoonekwa muDhuong kana fort. The Dirang Dzong inenge makore 150. Mamwe ematombo akadzimba kumativi evanhu vanonzi anenge ane makore 500. Iko kunopinda nematanho ematombo. Iwe unogona kuwana maonero akanaka kubva munzvimbo yakapoteredza kubva pano. Usiku huno ku Dirang.
ZUVA 02: DRIV TO TAWANG VIA SHELA PASS
Tawang iguta duku riri kumaodzanyemba kumabvazuva kweArunachal Pradesh. Tawang tours inopa mukana wakaisvonaka wekuona nzvimbo uye kutambira. Tawang Monastery ndiyo iyo inokwezva zvikuru yeTawang tour packages. Munguva yezororo reTawang vanoshanyira 17th yezana remakore reTangwang, iyo inowanikwa pamusoro peiyo 500 lamas uye zvinhu zvechiBuddha zvakakosha. An Indian Army War Memorial, Jaswant Garh imwe nzvimbo yakakurumbira iyo inofanirwa kushanyirwa munguva dzezororo reTawang. Tawang muparadhiso yevanoshanyira uye vanopa zvakanaka kutambira mukana kune vafambi vari muzororo muTawang. Munguva dzezororo dzinodhura muTangwang unogona kufamba kwenguva pfupi kuenda kune imwe nzvimbo iri kumativi akanaka. Usiku huno paTawang.
ZUVA 03: SVIRA MUMWE NESUNERI
Tawang nyika yeMonpa madzinza uye nzvimbo huru yeMahayana Buddhism. Mushure mekudya kwekudya chamangwanani, zuva roga roga raienda kune yakakurumbira Tawang Monastery. Zita reMonastery yegore re300, munharaunda inonzi 'Gompa' inonzi ndiyo yakwegura muIndia uye yechipiri guru reMonastery muAsia mushure meLhasa muTibet. Imba yeMasimire imire pamusana pegomo kune 12000 ft. Pamusoro pegungwa. Kutarisana nemupata wakafara uye wakakomberedzwa kumativi ose kuva makomo makuru. 12 kms kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweTawang ndiBrandung Chung Ani Gompa, musha weNuns. Shanyira Tawang Monastery 400yrs yekare nzvimbo yekudzidza yeMahayana buddist, Museum, Emporium uye misika yemunharaunda. Usiku huno paTawang.
ZUVA 04: DRIVE KUBOMDILLA
Dhaira kuBomdilla munzira yekushanyira Sherdukpens Tribal musha. I Sherdukpens idzinza duku. Ivo varimi vakanaka asi chido chavo chikuru nderokutengeserana. Chitendero chavo chiitiko chinonakidza cheMahayana Buddhism uye madzinza magico-chitendero chezvitendero. Usiku huno paBomdilla.
ZUVA 05: KUSVAKA KWEMORNING KWEGOMPA NENGUVA ICHI KUENDA KUI ITANAGAR
Itanagar ndiyo yaiva guta reArunachal Pradesh kubvira 20th April 1974. Itanagar iri panzvimbo dzezvikomo. Guta iri riri pamakiromita 350 pamusoro pekureva maruva. Icho chinouya nepamutemo pasi pePapumpare yeruwa. Iyo Nishis kana Nishings ndiyo dzinza guru muItanagar. Zvisinei, Itanagar inogona kutumidzwa se mini mini India, sevanhu vanobva munyika yose, vanogara pano maererano. Chinonyanya kukosha ndeyemashiripiti Tawang Gompa yakadzokidzwa nehombe-mahwendefa. Yakatangwa mu1681, iyi nhare yekare yainzi inonzi yechipiri guru-guru reBuddhist monastery rakazara uye inozivikanwa mumadhindaniti eBuddha nokuda kweraibhurari yake. Mumadziro aro akavakirirwa, zvishoma zvinotungamirira kusvika kumakamuri makuru ekunamatira uye anoyevedza ane chinyorwa cha 8m-high chaBuddha Shakyamuni. Pasi pakati pekona pane musamu muduku asi unofadza ane zvidhori, nguo, terepicikita uye zvimwe zvinhu zvemukati reDalai Lama. Mhemberero dzakataridzika (mitambo yakasvika mitambo yakaitwa nevamwe vatongi vechiBhudha mu gompas kufembera kukunda kwezvakanaka pamusoro pezvakaipa uye zveBuddhism pamusoro pezvitendero zvisati zvavapo) zvinoitwa panguva yeTorgya, Losar uye Buddha Mahotsava festivals Overnight kuItanagar.
ZUVA 06: KUTENDA KUZERO PAMUSORO WAKOVANYA KUTANGA KUKUNDA KUNYANYA KUNYANYA YA NISHYIS
Kubva munzvimbo yakakwirira yeArunachal Pradesh neZero Degree Temperature, Apatani Vanhu ndevamwe vevanhu vekutanga vanobva kune imwe nzvimbo yakakwirira kuchamhembe kweSansiri neSiang munzvimbo dzinotevera nzizi dzeKurung neKumey. Iri Gulu haina chero Nyaya Yakanyorwa. VaPatendi vateveri vakavimbika vekutenda kwaDanyi-Piilo, avo vanonyengetera kune Zuva (Ayo Danyi) uye Mwedzi (Atoh Piilo). Abotani anoremekedzwa semutongo mukuru weApatani uye mamwe madzinza munharaunda dzakapoteredza. Apo njodzi inowanzoitika, vanotenda kuti inokonzerwa nemamwe mweya yakaipa, uye saka vanoita zvikwereti kuburikidza nekubayira huku, mhou nemamwe mombe. Myoko, mutambo weushamwari uye kubudirira, unopemberera nenzira yakakura inogara kwenguva dzose yeMarch gore negore. Mipfeko yeApatani yakajeka uye yakajeka, asi iri nyore mumutauro. Tattooing (Tiipe) uye kuputika kwemakona makuru emapapu (yaping hullo) yakambove yakakurumbira pakati pevakadzi, kunyange zvazvo tsika iyi yave ichiderera kusvika pakupera mumakore achangobva kupfuura.Tsika iyi inotendwa yakatanga nokuti vakadzi vaida kutarisa varume kubva kumarudzi akavakidzani. Apatani vakadzi vaifungidzirwa kuti ndivo vakanaka kwazvo pakati pemarudzi ose eArunachal. Nenzira, varume vacho vanosunga bvudzi ravo muhomwe kumusoro kwepamusoro pehuma (kunzvimbo inonzi inonzi piiding) vachishandisa tsvimbo yendarira (piiding khotu) yakaenzana neA12 inches, yakaiswa pasi. Nzira dzebhanhire rakanaka kwazvo dzekabvu dzakagadzirwa mukundu (yari) uye dzakapinda muchimiro chebhiza-bhiza rine mugumo wakazara dzaive dzakasakarawo. Izvo zvidimbu zvedura zvakasungirirwa zvakasungwa pamwe chete, nechisungo chebhiza-gorosi akasungirirwa pachiuno. Varume vacho vanewo zviratidzo (tiippe) chidimbu chavo muchimiro che 'T' pasi pemuromo wakadzika. Vakadzi vacho vanoita zvidhinha pachavo nemitsara yakareba yebhuruu kubva pahuma kusvikira kumucheto wemhino uye mitsetse mitanhatu yakadzika pasi pemuromo wakadzika mumutambo. Vakadzi vanovhara zvigaro zvavo, izvo zvakakonzerwa mubhola (kupera) pamusoro pepamisoro. Bhandi skewer (kutaurira akh) inogona kuiswa ipapo horizontally. Usiku huno paZero.
ZUVA 07: TARIRA APATANI VILLAGES MUMWE NEZVAKAITWA ZERO
IvaApatani ndeyo dzinonakidza dzinza. Kusiyana nedzimwe madzinza, ivo vasiri vemuhedheni mune zvakasikwa. Vanodzidzira kushandiswa kwemvura kunogara munzvimbo dzakasvibira nekucheka makomo, asi mamwe madzinza anodzirima mumunda wakaoma nokuchera masango.
Sezvineiwo, nhengo dzinonyanya kufadza ndezvevakadzi vakwegura vemadzinza, vanopfeka zvidhori zvemaziso uye masimbi emhete. Iyi tsika, kunyange isipo ikozvino, inodzokera kumashure epanguva dzemazuva ano, apo vakadzi vaApatani vaifungidzirwa kuti ndivo vakanakisisa muArunachal Pradesh yose. Varume vemamwe madzinza vaigara vachiba vakadzi veApatani, izvo zvakatungamirira varume vaApatani kunyorera zviso zvevakadzi vavo uye kuita kuti vafukidze mapegi emakona, kuitira kuti vasanyanya kufadza.
Nguva yakanakisisa yekushanyira Ziro iri panguva yeMurung Rituals munaJanuary kana panguva yeDree Festival yaJuly apo rudzi rwacho runoita zvibayiro zvemhuka kuti ruremekedze Mwari.Kuva nguva yekurima, vashanyi vanogona kutora chikamu uye kucherechera risi cum hove irima, apo hove yakakurira muminda yemupunga. Usiku huno paZero.
ZUVA 08: DRIVE KUVAKA DAPORIZO PAMUSORO WAKOVANYA KWEHORO MIRIS
Sangano reGomo-Miris seimwe yeboka guru reDonipolo uye mababa avo ega ari kunzi ABO-TANI. ABO-TANI anonzi ndiye muzukuru we SICHI, pasi. Anotenda kuti akaberekerwa muhupenyu hwevanhu chaihwo nezvose zvisingaoneki kune mamwe makore. Munenge zvose zvikamu zveGomo- Mirisvira uye mabasa, rutendo hunobva pamabasa akasiyana-siyana muupenyu hweAna-Tani. Chikomo Miri (Nyishis) vanhu veArunachal Pradesh, India. Iyo inonyanya kugadziriswa munzvimbo dzakapoteredza Daporijo, District Upper Subansiri uye Raga neDollungmukh munzvimbo dzeAustin Subansiri. Chikomo Miri (Nyishi) chine vanhu vashomanana, inofungidzirwa ku9,000 nekuda kwekuti ivo vakanyatsogadziriswa pamwe chete nevakapararira uye vanovakidzani vemadzinza avo vari pedyo, Nyishi mu1998. Vanotaura mutauro Hill-Miri, kana Sarak-miri, mutauro weTibeto-Burman weIndia.Hill-Miris inowanirana vana vanozvarwa / nhoroondo ne Nyishis, kureva, Dopum, Dodum, Dol / Dolu.Overnight paDumporizo.
ZUVA 09: KUDZIRA KUNA KUTAVA KUTAURA TAGIN VILLAGES
Pakati pemuganhu weHQ wesuwa reWest Siang, Arunachal Pradesh. Ndiyo nzvimbo yakakwirira yedunhu reWest Siang weArunachal Pradesh iri panzvimbo yakakwirira ye300 m kubva pagungwa. Agere pakati pemhepo yakawanda yakakomberedzwa, iri taundi duku rine misha yakaisvonaka mukati nokunze.Drive kusvika kune imwe nzira munzira yekushanyira misha yeTagin. Tagin inoreva rudzi rweArunachal Pradesh, iyo inhengo yezvinyorwa zvakakura zveTani Tribes. Akawanda maTagin anowanikwa muDaporijo, Upper Subansiri kweruwa asi mamwe anowanikwawo munzvimbo dzakabatana West Siang. Muna 1971, pamusoro pe20,000 inonzi ndeyeTagin dzinza. MaGagins anowanzobatana neDonyi Polo,  kunyange zvazvo mapoka maviri eTagin-aNaga naMara ava pasi pesimba reTibetan Buddhism. Tibetan Buddhist simba mukati mezvikamu zveTagin zvakaguma nekubuda kweTibetan kubva kuchamhembe muzana remakore re18 uye pamwe nekushanyira nemamishinari eBuddhist eboka reNyingma uyo akapa mutero kuna madzishe semugumisiro wekugadzirisa kweTibetan munyika yavo. Usiku huno paAlong
ZUVA 10: ALONG
Zuva roga roga Kuongorora misha yakasiyana-siyana neTrkking, kuwirirana nekufananidza mupata wakaisvonaka wevanhu veAdi Group muArunachal Pradesh. Adi ane kusiyana kwakasiyana nedzinza, iyo inopesana kubva kune imwe saAdi (Gallong, Minyong, Pasi, Padam, Bori, neBokar), kana iwe ukashanyira mukati mukati mezvimbo idzi uchawana madzinza aya ose, asi mukati uye nepamativi Pamwe iwe uchawana chete Adi (Gallong) tribal people. Iwe unogona kushanyira maJirdin, Kabu, Kaying misha
ZUVA 11: MUVANZI WEADI GALO & MINYONG TRIBAL VILLAGES & DRIVE KUPASSIGHAT
Endai kune Passighat Enroute mushanyira Adi Minyong Tribal villages. Minyong Tribes inowanikwa muEast Siang, Upper Siang uye West West. Izvo zvakabva kuRiga Village. Misha yavo inowanzowanikwa pabhangi yakarurama uye kuruboshwe rwizi Siang (Brahmaputra muAsam), kutanga Tuting-Gelling kumapani eAsam, Jonai. Vanoona Donyi-Polo sechitendero chavo. Minyong vanhu vanozivikanwa nekushinga kwavo sezvo vakarwa hondo neBritish Expedition kune nzvimbo yakakwirira mumakore ekupedzisira 19th century. Usiku huno pa Passighat.
ZUVA 12: CROSS RIVER BRAHMAPUTRA & DRIVE KUDIBRUGARH
Dhaira kuFerry Ghat & kuyambuka Rwizi rweMighty Brahmaputra uende kuNyika Yekubuda Kwezuva, Arunachal Pradesh. Dhiya kuPassighat. Tarisa kuIndaneti.Indaneti kuDibrugarh.
ZUVA 13: DEPARTURE
Fly to Delhi / Kolkata for International Connection.